लक्ष्मी पुजाकै दिन काठमान्डौमा घ'ट्यो ठुलो घ'टना ! - Reel Mandu
लक्ष्मी पुजाकै दिन काठमान्डौमा घ’ट्यो ठुलो घ’टना !
दीपावली गर्ने क्रममा अनामनगरको कार्की भवनमा आ’ग’ला’गी भएको छ । सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि रहेको स्थानीय जयन्द्र कार्कीको घरको दोश्रो तलामा आ’ग’ला’गी भएको हो ।
आ’ग’ला’गीबाट फर्निचर, ल्यापटप लगायतका सामानहरु जलेको महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबारका डिएपी भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए । आ’गो अहिले पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको श्रेष्ठले बताए ।
अब हुने चुनावमा एमालेलाई कुचो लगाएर बढार्ने होः गगन थापा
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले अब हुने चुनावमा नेकपा एमालेलाई हराउनुपर्ने बताएका छन्।
भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिका वडा नम्बर ७ गुण्डुमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले एमालेलाई स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा अब हुने चुनावमा हराउनुपर्ने बताए।
‘यसपटकको चुनावमा नेकपा एमालेलाई कुचो लगाएर बढार्ने हो। बढार्दा कुनाकाप्चामा धुलो अड्कियो भने भ्याकुम लगाउने हो,’ थापाले भने।
विगतमा पनि कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्दा पहिलो पार्टी बनेको थापाले बताए। नेकपा एमालेकाअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेसँग एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा आउन केही समयअगाडि चेतावनी नै दिएका थिए।
‘सिङ्गल-सिङ्गल लड्ने भनेको होइनरु हामी विगतमा सिङ्गल नै लडेर पहिलो पार्टी बनेको हो,’ उनले भने। उनले कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व लिएको र जिम्मेवारी पूरा गरिने बताए।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले दुई पटक भेटेर सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामबारे जानकारी गराएको र नराम्रा काम नगर्न आग्रह गरेको पनि थापाले बताए।
उनले एमाले पार्टी नभई ओली एन्ड कम्पनी भएको आरोप लगाए। ‘एमालेमा फरक मत राख्ने दुई जना मात्रै देख्छु। भीम रावल र घनश्याम भुसाल। बाँकी कोही हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘एमाले फुट्यो अहिले ओली एन्ड कम्पनी भएको छ।’
उनले अर्ली इलेक्सन नहुने पनि बताए। बरू वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुने उनको भनाइ छ। पार्टीको १४ औं महाधिवेशन मंसिरमा हुने र पुस २ भित्र निर्वाचन आयोगमा १४ औं महाधिवेशनपछि आएको कार्यसमिति दर्ताका लागि जाने पनि उनले बताए।
राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने सदस्य पदमा चुनाव हुँदैछ भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचनको तयारी छ।
माधव नेपालविनाको एमाले हुन्न, केपी ओली प्राइभेट लिमिटेड
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले माधवकुमार नेपालविनाको एमाले हुनै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले अहिलेको एमालेलाई केपी ओलीको भजनमण्डलीको संज्ञा दिए ।
‘माधव नेपालविनाको एमाले हुन्न,’ आज काँग्रेस महालक्ष्मी नगरपालिकाले आयोजना गरेको दिपावलीको शुभकामना आदानप्रदानमा बोल्दै भने,‘केपी ओली प्राइभेट लिमिटेड हो ।’
अहिलेको एमालेमा ओलीको भजन गाउनेहरु मात्र भएको टिप्पणी गरे । भीम रावल र घनश्याम भुसालबाहेक कसैले ओलीको गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्न नसक्ने बताए । उनले भने,‘भीम रावल र घनश्याम भुसालबाहेक केपी ओलीको भजन गाउनेहरु मात्र बाँकी छन् ।’
थापाले अर्को मंसिरमा मात्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन बताए । अर्ली इलेक्शन चाहेर पनि हुन नसक्ने उनको भनाई थियो । ‘हामीले चाहँदैमा अर्ली इलेक्शन हुँदैन, संविधानले दिदैन,’ थापाले भने,‘जेठसम्ममा स्थानीय चुनाव र मंसिरमा संसदको चुनाव हुन्छ ।’
आगामी चुनावमा काँग्रेस विजयी हुने बताए । काँग्रेस चुनाव जितेर पाँच वर्ष सरकार चलाउने संकल्पमा बढेको समेत बताए ।
उनले नेकपा एमालेको बारेमा चिन्ता गर्नुनपर्ने भन्दै विवेकशील जनताले चुनावमा देखाइदिने बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुवामा जुवाडेले सबै हारेको अवस्थामा पुगिसकेको टिप्पणी गरे ।